Maxkamada ciidamada oo lix nin oo Shabaab ah xabsi daa’in ku xukuntay – STAR FM SOMALIA
Maxkamada Darajada Koowaad ee ciidamada Qalabka sida Dowladda Federalka Somaliya, ayaa Saaka oo Khamiis ah waxa ay xukun xabsi daa’in ah ku riday rag la sheegay inay Shabaab ka tirsan yihiin.
Raggaan oo tiradooda ay gaareyso lix nin, waxaa gacanta ku soo dhigay ciidamada Maamulka Galmudug, kadib markii laga soo qabtay deeganada Maamulkaasi, waxaana lagu soo wareejiyay maxkamada ciidamada qalabka sida.
Guddoomiyaha Maxkamada ciidamada Qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute oo dhageysiga dacwadaha kadib ku dhawaaqay Xukunka, ayaa sheegay raggaan inay ku cadaatay fal dambiyeedyadii lagu soo eedeeyay.
Waxa uu sheegay inay ka tirsan yihiin Ururka Al Shabaab, sidoo kalena ay ka qayb qaateen weeraro dhowr ah oo ka dhacay Gobolka Galgaduud iyo deeganada Galmudug.
Maxkamada ciidamada Qalabka sida ayuu sheegay raggaasi inay ku xukuntay xabsi daa’in lixdooduba.
Xasan Cali Nuur Shuute Guddoomiyaha Maxkamada Ciidamada Qalabka sida ayaa sheegay nin kasta oo ka tirsan Al Shabaab ee maxkamada ay ku cadeyso eedeymaha loo soo jeediyay in la marsiin doono cadaalad.
Xukunka Xabsi daa’inka ah ee raggaan lagu riday ayaa waxaa uga furan inay kiiskaan ka qaataan racfaan.
Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Soomaaliya oo la kulmay dhiggiisa dalka Urdun(Daawo Sawiro)